Amacwecwe abantwana avela kwi-RTVE kunye ne-Imaginarium | I-Androidsis
Mailen bravo | | Amacwecwe e-Android, Tutorials
Izixhobo ze-Android ziya ngokwanda ngokwahluka, ukusuka kwiifowuni kunye neetafile ukuya kwiewotshi kunye nomabonakude, kodwa nakwezi zixhobo kukho iintlobo ezahlukeneyo kunye neenjongo ezithile zentengiso, nasemva komsitho waseSpain. Umnyhadala u-El Chupete ubonakala ukuba isitshixo eSpain iya kuba kukwenziwa kwamacwecwe abantwana.
Zimbini izixhobo ezijolise ngokucacileyo kweli candelo litsha, kwelinye icala Ithebhulethi yeSuperPaquito kwaye kwelinye ithebhulethi yejelo likamabonwakude i-RTVE kunye nomqondiso wayo okhethekileyo wabancinci: Clan.
Imodeli yokuqala ithebhulethi yabantwana SuperPaquito, ongowenkampani ye-Imaginarium. Ithebhulethi yenzelwe ngokungqongqo abantwana, inokwakhiwa okunganyangekiyo kunye nokusetyenziswa okulungiselelwe ukusetyenziswa kwabantwana kwithebhulethi, bahlala becinga ngokuzonwabisa kunye nokufunda, kodwa nangokukhathalela iicwecwe kunye nemveli.
Ithebhulethi yeSuperPaquito iya kuba nescreen sokuchukumisa uninzi ukuze abantwana bafunde ukusebenzisa ithebhulethi ngokupheleleyo ukuze bakhule kwaye kamva baziqhelanise nokusetyenziswa kwezixhobo zemveli ezingaphezulu. Kuyo nayiphi na imeko, kufanele kuqatshelwe ukuba itafile yabantwana eyilelwe yinkampani yokudlala iya kuba lushicilelo olunomda.
Ityala le-RTVE lahluke kancinci, kuba ithebhulethi, isenzelwa abantwana, iya kuba nenkqubo yokusebenza ye-Android 4.0 Ice Cream Sandwich. Ingaphakathi lale tablet intsha yabantwana iya kuba neprosesa ene-frequency ye-1 GHz kunye nenkumbulo yangaphakathi ye-4 GB kunye nokubanakho kokuyandisa ukuya kuthi ga kwi-30 GB.
Isikrini sethebhulethi yabantwana ye-RTVE iya kuba zii-intshi ze-7, sisebenzisa ithuba lokuyilwa kweepilisi ngeescreen ze-7-intshi ezivela kwiinkampani ezinje ngeSamsung. Ukongeza, ithebhulethi iya kuba noqhagamshelo lwe-Intanethi ngothungelwano lweWiFi kunye nemveliso ye-HDMI, kunye neekhamera zeefoto kunye nokurekhodwa ngaphambili nangasemva.
Phantse njenge ithebhulethi yemveli, Umba wabantwana wethebhulethi ye-RTVE unikezelwa ngesihluzi somxholo kunye nenkqubo yokuhamba ngokukhuselekileyo, kunye nokubandakanywa kwenguqulelo elungileyo yesicelo seClan, umjelo wabantwana weRTVE.
Ucinga ntoni ngamacwecwe enzelwe abantwana? I-Android emva koko ijoyine i-RTVE kwicandelo le iipilisi zabantwana, kwaye mhlawumbi iya kuba licandelo elinomtsalane kwintengiso ukuba abazali baqinisekile ngezibonelelo zokuphuhliswa kokumamela kunye nokuzonwabisa okucetyiswa yi-RTVE nokunye okunje.
Iinkcukacha ezithe xaxe - Ithebhulethi ye-Nexus inokufika ngoJulayi ezandleni zika-Asus
Ikhonkco - Akukho ndlela
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Amacwecwe e-Android » I-RTVE kunye neSuperPaquito, iipilisi zabantwana ezine-Android
Ewe, ngekhe ibe sisipho esibi kubatshana bam ngeKrisimesi ukuba bekungengokusikwa nguRhulumente waseSpain ... Esi sipho seKrisimesi sindinika iibhetri ukuze baqhubeke nokusebenzisa izipho zangaphambili iminyaka.
Ungandixelela ukuba enye evela kwi-rtve sele ikhona? Ndazi phi ukuba unokulufumana okanye wandise ulwazi olunika lona? enkosi! Ngale ndlela ndiphepha ubumdaka bokuzisa uTabeo ovela eMelika
Ewe, kwinto endiyibonileyo iyafumaneka kwiiToys »R» Iivenkile zethu, okanye ubuncinci kwiwebhusayithi yazo:
Yitsho ukuba umfanekiso ovelayo ayisiyiyo le Superpaquito. Kwelinye icala, isixhobo siyafumaneka ngendlela engenamda, kwiwebhu nakwiivenkile zeImaginarium
Ndincamathisela ikhonkco lemveliso ngolwazi oluthe kratya.